Cimilada Finland - InfoFinland
Warar ku saabsan Finland > Warar aasaasi ah oo ku saabsan Finland > Cimilada Finland
Cimilada Finland way ka qabowdahay wadamo badan oo kale. Sidaas oo ay tahay cimilada isbadbadal badan ayaa ku yimaada sanadka wakhtiyadiisa kala duwan. Finland waxaa ku yaal bey’ado badan oo aad ku dhadhaqaaqi karto xilli-sannadeedyada oo dhan. Bogga InfoFinland Ku raaxeysiga iyo ku socodka dabeecadda waxaad ka heleysaa macluumaad ku saabsan, sida aad xilli-sannadeedyada kala duwan ugu dhaqdhaqaaqi karto bey’adda.
Bilaha jiilaalka ee Finland waa Disembar, Janaayo iyo Febraayo. Xittaa Nofembar iyo Maarso cimiladu waa ay qabowdahay. Inta badan heerkulku wuxuu ka hooseeyaa eber selsiyus waxayna hoos ugu dhici kartaa illaa iyo -20 digrii. Woqooyiga Finland waa ka qabow badan yahay Koonfurta Finland heerkulkuna wuxuu noqon karaa -30 digrii. Jiilaalka waxaa di’i kara baraf. Inta badan dhulka waxaa yaal baraf waana taraarax.
Xiro jiilaalka dhar qabowga celiya. Waxaad xirataa ugu yaraan jaakadda barafka ee diirran, koofida dhaxanta, gacan-gashi, iskaaf iyo kabaha jiilaalka oo diirran. Wakhtiga cimiladu ay qabowdahay waxa muhiim ah in uu dhar badan iska dul xidho qofku.
Jiilaalka Finland waa wakhti aad u mugdi badan, sababta oo ah qoraxdu waxay soo baxdaa barqadii waxayna dhacdaa galabta horeba. Waqooyiga Finland ayaa ka mugdi badan koonfurta Finland. Finland qaybaheeda waqooyiga sare ah waxa yimaadda wakhti aynan qoraxdu sooba bixin muddo isbuucyo ah.
Wakhtiga iftiinka ah oo gaaban ayaa sababaya daal iyo diiqad ama walaac. Habab badan oo kala duwan ayaad xaaladdaada ku fududayn karto.
La xiriir ehelkaada iyo saaxiibadaa.
Si joogto ah u samee hiwaayad.
Cun cunto caafimaad leh.
Ku dadaal in aad hesho fitamiin D kugu filan.
Soo gado nalka ilayskiisu dhalaalayo.
Hagaha noqo mid jiilaalka ladanFinnish
Gugu waxa uu koonfurta Finland bilowdaa dhamaadka bisha sadexaad, waqooyiga Finlandna waxa uu ku bilowdaa dhamaadka bisha afraad. Caadiyen wakhtigaas cimiladu way qabowdahay wali, laakiin way ka diirantahay wakhtiga jiilaalka. Bey’ado wakhtiga guga aad ayeey isu beddeshaa. Barafka ayaa dhalaala bey’aduna waxay isu beddeshaa cagaar, marka ay dhirta iyo geedihi caleemo bixiyaan.
Bilaha samarka Finland waxay yihiin bisha 6aad, bisha 7aad iyo bisha 8aad. Bisha ugu kulul inta badan waa Luulyo. Celceliska heerkulka Koonfurta Finland ee xagaagu waa 20 derada selsiyuska ah dhinaca woqooyina waa 15 oo derajada selsiyuska ah.
Jiilaalka iftiinka ayaa aad ugu badan Finland. Habeenkii iyo maalintiiba waa iftiin badan maadaama ay qoraxdu dhacdo wakhti dambe ayna soo baxdo wakhti hore. Waqooyiga Finland ayaa ka iftiin badan koonfurta Finland. Bisha ugu iftiinka badan waa bisha 6aad. Markaas waxaa Finland laga xusaa Yuhanuska, habeenka aysan qoraxdu dhicin iyo bartamaha xagaaga. Finland qaybaheeda ugu sareeya ee waqooyiga qoracdu bilowga xagaaga maba dhacdo.
Haddii ay kugu adagtahay in aad ku seexato meel iftiin badan, geli qolkaada jiifka daahyada mugdiga.
Wakhtiga dayrtu sida caadiga ah waxa uu bilowdaa dhamaadka bisha 8aad ama bilowga bisha 9aad. Sebtembar iyo Oktoobar Finland waxay ku jirtaa wakhtiga midabada kala duwan ee dayrta. Caleenta dhir iyo geedo badan oo xagaagi ahaa kuwa cagaaran ayaa isu beddela midabka jaale, oranjiga iyo casaan. Inta lagu xilliga midabada dayrta bey’addu waa mid qurux iyo midabo badan.
Xilliga dayrta cimiladu badanaa way qabowdahay roobab iyo dabayllo badana way wadataa. Wakhtigaas mugdiduna wuu soo bataa maadaama ay qoraxdu dhacdo wakhti ka horeysa wakhtiga ay dhici jirtay jiilaalka.
Warar ku saabsan cimilada FinlandFinnish | Ingiriis
Markii ugu dambeysay ee waqtiga lala simay: 23.07.2021 Boggan war-celin ka soo dir